पुनहिल की पुनमाया - ParyatanBazar.com
पुनहिल की पुनमाया
जेठ २५, काठमाडौँ। “तिम्रो सारै माया लाग्छ सरदार ”,
फक्रेको लाली गुरास जस्तो मुस्कान सहित बोलिन पुन मायाले ।
होर भनेको ?
मेरो माया किन लागेको नि? अरू ह्यान्ड्सम ह्यान्ड्सम गाइडहरू छन् । म बाहुन तिमी मगर जात मिल्दैन, संस्कार फरक अनि कसरी ??
म किसानको छोरो तिमी लाहुरे ( पेन्सन वाला ) कि छोरी । मेरो प्रश्नहरू खस्न नपाउँदै पुनमाया आफ्नो सुकोमल हातले मेरो मुख थुनी दिन्छे र भन्छे “ अब धेरै नबोल मेरो मन चोर्ने लुरे बाहुन ।
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको कविता पढेको छैनौ ?
मानिस ठुलो दिल ले हुन्छ जात ले हुँदैन । अनि मन परेसी लाटोकोसेरो पनि ह्यन्ड्सम हुन्छ नि” हल्का नखरा देखाउँदै बोलिन पुनमाया ।
आजको दिन रमाइलो छ त्यही माथि अन्नपूर्ण हिम शिखर साँझपखको सुर्यकिरणले धपक्क बलेकी छिन । बादलको घुम्टो र रङ्गी विरङ्गी लालिगुरास पाखा भरी फुल्दा लाग्छ अन्नपूर्ण सिफनको सारी र मलमलको पछ्यौरीले सजिएकी दुलही हुन । त्यही हिम श्रृङ्खला नियाली रहेकी पुन माया आज औधी सुन्दरी देखिएकी छिन ।
अन्नपूर्ण हिम शिखर जस्तै सुन्दर सेता दन्त लहर । गहुँगोरो बाटुलो चन्द्रमुखी अनुहार, ठुला ठुला ओठहरू र सुन्दर नयन । उनको सुन्दरतालाई शब्दहरूले वर्णन गर्नै नसकिने।
बस यती भन्छु, पुन माया तिमी अन्नपूर्णकी मन छोरी मोनालिसा हौ । अरू सबै गाइड र बिदेसी आगन्तुकहरूलाई खाना खुवाइन् पुनमायाले तर मलाई चाहिँ खाना नपुगेर फेरी बसाएको रे । गाइड दाइहरू धेरै भोकाएका रहेछन् रे ।
त्यो उनको पुरानो बानी नै थियो मलाई एक्छिन भने पनि अबेर सम्म रोक्ने अनि जिस्कने । मेरो नजिकै बसेर मन्द मुस्कान छर्दै अन्डा ( अम्लेट ) सहितको स्वादिष्ट भोजन गराइन आफ्नो प्यारो बाहुन लाई पुनमायाले गाइड र सहयोगी मित्रहरूलाई पुनमाया कि आमाले किट्लीमा तताएको नारी पा ( रक्सी ) रसास्वादन गराइन्।
म भने पुनमायाको अनुहारको सौन्दर्य मै भुलिरहेको थिए । पुनमायालाई सत्य कथा /तथ्य कथा जस्ता पुस्तक औधी मन पर्छ । कथाका पात्रहरू र वियोगान्त घटना पढेर निकै भावुक हुन्छिन् उनी । आज पनि मैले काठमाडौँ
बाट लगिदिएको तथ्य कथाको केही अंस पढि सकिछन । सहरका मानिसहरू त कति निस्ठुरी ! भनेर म तिर व्यङ्ग्य गर्दै थिइन ।
मैले उनको कुरामा सहमत जनाए । हो सहरमा निस्ठुरी, अबसर्बादी र कपटी धेरै छन् । गाउका मानिसहरू झरनाको पानी जस्तै कन्चन हुन्छन् ।
तिमी पनि रुप्छे छहरा जस्तै सुन्दर र कन्चन छौ पुनमाया भनेर तारिफ गरे । मेरो कुरा सुनेसी पुनमाया कर्के नजर ले हेर्दै जवाफ फर्काइन् “ हेर न मलाई फुर्क्याएको फेरी “ ।
सदा झैँ उनी मलाई सोध्छिन् ” अब फेरी कहिलेलाई छ ट्रेकिङ ”?
छन् त कम्पनी मा ट्रेकिङ जाने छन् तर मेरो साहु जि को साला, जेठान र भाइ भारदारहरू पनि काम गर्छन् । उनीहरूलाई सकेसम्म राम्रा गोराहरू दिन्छन र व्यस्त पनि उनले सुनाए । हामी त प्राथमिकता मा पर्दैनौ । खोइ कहिले पो हो ? प्याकेजमा नभए न हायरिङ्ग भए पनि आउने हो पुनमायालाई भेट्न भनेनी । यति भनेको मात्र के थिए उनी मुस्कुराइन ।
मलाई घोरे पानी पदयात्रा निकै मन पर्छ । साँच्चै किन किन मलाई बिरेठाटी बाट तर्पङे उकालो हिँडेर माताठाटिको कलधाराको टुटीमा मुख गाडेर कल कल पानी पिउन मन लाग्छ ।
राम दाइको , बेली सरा दिदीको घर आगमनको पेटी मा टुसुक्क बसेर पसिना पुछ्न औधी मन पर्छ । हिलेको ममता लजकी ममता कि आमा अनि तिखेढुङाको चन्द्र लजको माइली दिदीले लेमन जुस राखेर दिएको चिसो पानी ठमेलको मिन्ट कुलर भन्दा अब्बल लाग्छ ।
सल्लेरीको नाकै ठोक्किने उकालो त मामाघर गए बराबरै हो । उल्लेरी कटी नाग्गेठाटीको हाङ्री आई रेस्टुरेन्टमा कुखुराको झोल भातले काठमाडौँको बटर मसलालाई माथ गर्छ । अनि घोरेपनी को पुनमायाको गेस्ट हाउस त मेरै घर जस्तो लाग्छ ।
प्राकृतिक छटाले सजिएकी घोरेपानीमा तिलोत्तमा जस्ती पुन माया सँग प्रेम बस्यो । जात नमिलेर के भो मन मिलेपछि । धन थोरै भए पनि मन ठुलो भएपछि ।
पुनमायाको मन सफा छ । छल कपट कुन चरीको नाम हो उनलाई थाहा छैन ।
बिरेठाटीको झरना जस्तै सुन्दर र सितल छिन उनी । सल्लेरीको पा सुनाखरी जस्तै बहुमूल्य छ उनको मुस्कान । घोरेपानीको पाखामा फुल्ने गुरास जस्तै फक्रेकी उनको योबनमा म भिर माहुरी बन्ने छैन , जो रस चुसेर उड्छ । पुन माया सुन्दर फूल हुन अनि म त्यो फूलको हेरचाह गर्ने माली । म फूल हेरिरहन्छु आफूलाई नै बिर्सिएर ।
म टोलाएको देखेर पुनमायाकी आमा भन्छिन् “ निकै टोलाइछ त केटा । नारी पा पनि खाउन्न केरे “ ?
म झल्यास्स हुन्छु । पुन माया मेरो एकोहोरो हेराईले रातोपिरो हुन्छे । हैट , त्यो क्षण शायद सबै भन्दा मन पर्ने क्षण हो जीवनको !
भोलि बिहानै गोरेहरु लिएर पुन हिल जानु ईछ । चाडै सुत्नुपर्ने छ । ल म सुत्न जान्छु है भन्न पाउँदा नपाउँदै नाटकीय पाराले पुनमायाको मायालु झटारो आयो “ गए भयोन्त कस्लाई सुनाएको “?
सुनाउन त तिमी लाई नै सुनाएको हो नि । एक्लै त्यो पट्यारिलो निस्पट्ट रात कसरी छिचल्नु ? मन मनै गुनगुनाएर लागे ओछ्यान तिर ।
लेखक : सुदर्शन न्यौपाने